TOMATO IRINA F1: SAWIR, SHARAXAAD KA DUWAN NOOCYADA KALA DUWAN IYO ASTAAMAHA - NOOCYO YAANYO
Tomato Irina f1 - noocyo hore u bislaaday oo isdhaafsan
Bannaanka intiisa badan marka la dooranayo noocyo kala duwan oo yaanyo ah ayaa muddo dheer bixiyay doorashadooda noocyo kala duwan. Tani maaha wax la yaab leh, maaddaama dhammaan waxyaabaha kale ee la siman yihiin, ay aad ugu adkeeyaan arrimaha dibadda, sare u qaadista iyo aan qabin.
Mid ka mid ah Beelaha ugu caansan waa noocyo kala duwan "Irina f1", oo leh qiyamyada aan heleyno.
Sidaas, yaanyo "Irina" waxa loola jeedaa noocyada isdhexgalka ee Bisaylkiisa hore, miraha ugu horreeya waxaa la siiyaa 95 maalmood ka dib biqilka. Qodobka ugu sareeya, heerka ugu sareeya ee koritaanka waa caadi ahaan 130 cm. Kala duwan ayaa ku habboon koritaanka aqalka dhirta lagu koriyo, iyo dhul furan.
Tamaandhada "Irina" waxay koraan qiyaasta dhexdhexaad ah, waxay leeyihiin qaab wareegsan, waxoogaa hoos u dhigaya sare iyo hoose. Xaalad aad u qoto dheer, tamaandhadu waa casaan leh maqaarka khafiifka ah, dusha sare ma caleen.
Saxarka ayaa cufan leh dhadhan yaanyo kala duwan. Cabbirka miraha waa yar yahay, qiyaastii 120-130 g.
Sida noocyo badan oo isku dhafan, yaanyada "Irina" waxay leeyihiin faa'iidooyin ka badan kuwa faa'iido la'aanta:
Waxsoosaar sare - laga bilaabo 1 mitir oo laba jibbaaran waxaad ka qaadan kartaa ilaa 18 kg oo miro;
caabbinta sare ee cudurrada iyo cayayaanka oo sifo u leh yaanyada;
bandhig fiican iyo karti u leh inay u dulqaataan gaadiidka muddada dheer.
Dhibaatooyinka kala duwan ee kala duwan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka culus ee culus, maadaama noocyada noocan ah ay si aad ah uga taxaddaraan xanaaneynta waxayna leedahay midabkiisa gaarka ah ee beerashada.
Horumarinta yaanyada ma aha mid aad u adag, laakiin dhib badan, sababtoo ah waxay u baahan yihiin taxaddar taxadar leh xeerarka diyaarinta iyo waqtiga. Tamaandhada "Irina f1", sida noocyada kala duwan ee isku dhafan, waxaa lagu koray geedo taran geedo laga soo qaaday.
Seeds for geedo lagu beeray wax ka yar lix toddobaad ka hor taariikhda beerto geedo dhulka. Sida caadiga ah, miraha Beelaha aan la daboolay processing dheeraad ah, jeermis dilida iyo biqilka, sida miraha yaanyo caadiga ah.
Kala soo qaado noocyo kala duwan oo yaanyo ah sida "Chio Chio San", "Pink Stella", "Bear's Paw", "Petrusha-Gardiner", "Lazyka", "Bokele", "Honey", "Countryman", "Solerosso" "Niagara", "Pink Elephant", "Rocket", "Doll Masha", "Grapefruit", "Strawberry Tree", "Korneevsky Pink".
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in soo-saaraha lagu eedeeyey inay u diyaariyeen xaaladaha wax soosaarka warshadaha, waxayna diyaar u yihiin beeridda. Si kastaba ha ahaatee, beeralayda waayo-aragnimo ku talinaynaa jeermiska abuurka xaalad kasta, haddii miraha aan la granulated.
Si arrintan loo sameeyo, waxay ku qooyay xal raspberry xoog ah ee dalagga potassium ka hor beerto. Xalka waxaa lagu sameeyaa heerka 1 koob oo biyo ah 1 g oo ah manganese qalalan. Seeds suufka waxaa lagu dhejiyaa daloolka potassium 10 daqiiqo kadibna maydhay. Ka dib markii nidaamka, miraha waxaa lagu beeray sanduuq leh dhulka u dhalaalaya geedo. Carrada ay sanduuqa la buuxinayo waa in sidoo kale la ilaaliyaa.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo arrintan loo samaynaayo - qof ayaa ku daadiya xal isku mid ah kaneecada isku mid ah, qofku wuxuu isku dardaraa ciidda foornada, qaarna ku shub biyo kulul.
Waa muhiim! Waxaad iibsan kartaa ciidda diyaar ah ee dukaanka beerta, ka dibna habka loo nadiifiyo ciidda ka hor beerashada abuurka waa la dayacin karaa.
Carrada xilliga beergooyinku waa inay noqdaan kuwo qoyan oo is dulfuulan. Seeds waxaa lagu beeray kareemo ilaa 2 cm qoto dheer, fogaan ah 1.5-2 cm oo midba midka kale ka mid ah oo lagu daboolay isku dar ah ciidda kor ku xusan. Hadda geedo mustaqbalka waxay u baahan yihiin waqti, diirimaad iyo iftiin. Caleemaha waxaa laga filan karaa, celcelis, todobaad ka dib, mararka qaarkood - kadib 10 maalmood.
Waraabinta geedo waa in ay ahaato mid taxadar leh lana fuliyo hadba sida loogu baahdo, biyaha waa in aysan aheyn mid qabow ka badan 22 ° C.
Saameyn weyn oo ku saabsan goosashada mustaqbalka waxay leeyihiin geedo goos goos ah. Tani waa asal ahaan gawaarida warshad ku jirta weel kale.
Nuxurta soo qaadashada ayaa ah in sidan oo kale ay jirto marka laga reebo dhirta aan soo saarin xididada ku filan, ama haddii seedling ay saameyneyso cudur ka mid ah.
Sida caadiga ah Beelaha ku quusay 10-14 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya.
Waa muhiim! Warshad waa la baddali karaa oo keliya marka ay jiraan ugu yaraan laba caleemood oo geedo ah.
Marka transplanting waa in aad si taxadar leh u dhaqmaan, isku day inaadan waxyeello nidaamka xididka iyo asliga ah ee geedka. Dib u soo celinta seedling leh buro dhulka ah ee dheriga shakhsiga ah. Ka dib markii la dhamaystiray qaadashada, geedo cusub lagu beeray ayaa lagu waraabiyaa biyo la degay.
Ka hor inta beerto geedo dhulka waa in la adkeeyo. Tani, weelasha leh geedo ayaa si tartiib tartiib ah loo bartaa si loo yareeyo heerkulka qolka: maalintiiba ilaa + 16 ° C, habeenkii + 8 ° C. Markaa dhirta waxaa loo sameeyaa hawada furan, si tartiib tartiib ah ayey u kordhineysaa waqtiga joogitaanka maalin dhan.
Ma taqaanaa? Haddii ay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado dulqaadkii abaaraha ee duurka yaanyowga mustaqbalka, waxaa lagama maarmaan ah marxaladda geedo sii kordhaya si ay u biyo ha u dhaafin toddobaadkii hal mar.
Caadi ahaan, soo degidda dhulka waxay dhacdaa 50-60 maalmood ka dib muuqaalka caleemaha kowaad. Waa lagama-maarmaan in si habboon loo wajaho xulashada goobta ay tamaandhadu kori doonaan, maaddaama mugga dalagga mustaqbalka ay ku xiran yihiin.
Tamaandhiga "Irina F1", sida noocyada kala duwan ee kale, waa qoyaan-jecel, iyo sidoo kale jecel qorrax iyo kuleyl, inkastoo caleenta laga yaabo inay ka soo baxdo qoraxda tooska ah. Waxa ugu fiican ee yaanyada sii kordhaya waa aagga wajahaya koonfurta, si fiican u hawo, laakiin ma qabow, laga ilaaliyo qoraalada xoog leh.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado waxa sii kordhaya ee qorshaha si tamaandhada iyo, ka socdaa tan, si habboon u diyaariso ciidda.
Daboolka iyo cagaarka cagaaran ayaa sidoo kale is waafaqsan, yaanyada ayaa si fiican u koray carrada taas oo qajaarka ama zucchini la koray.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ka fogaataa meelaha ay khudradda qoysaska habeenkii soo baxaan: dalagyadaasi si aad ah ayey u ciribtirmaan ciidda, sidaas darteed ugu yaraan saddex sano ayaa loo baahan yahay si loo soo celiyo.
Ciidda aagga la doorto ayaa la caleemo saaray cawska, ka furfuray, loola dhaqmey xal copper sulfate si loo burburiyo cayayaanka suurtagalka ah, ka dibna la bacrimiyo Bacriminta macdanta iyo qoday. Geedo yaanyo ah xilliga ay ku beeranayaan dhul furan waa inay ahaadaan ugu yaraan 20 cm Ka hor intaan la beeri, geedo waxaa lagu daweeyaa sunta cayayaanka si looga ilaaliyo baradho-baradho barafado.
Cayayaanka waxaa ka mid ah Agita, Marshal, Lightning, Tanrek, Mospilan, Regent, nadiif ah, Fastak, Vertimek, Kemifos.
Geedka geedo waxaa lagu beeray dhulka si habeysan oo dusha sare loo diyaariyey: wax aan ka badnayn 4 duurka halkii mitir labajibbaaran.
Inkastoo xaqiiqda ah in baadiyaha of this kala duwan yihiin ma aha mid aad u sarreeya oo aad u deggan, bannaanka u khibrad xoog leh ku talineysaa xirashada iyo shakhsi ahaan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in yaanyo "Irina" koraayo kooxo aad u ballaaran oo dhaawici kara asliga geedka.
Si dhirta loo diido in la xoojiyo xooggaga horumarinta qaybta cagaaran ee baadiyaha, usbuuc kasta waxaa la fuliyaa, taas oo ah, ka saarista caleemaha soo baxaya. Tani waxay si weyn u kordhin doontaa dhalidda dhaqanka. Years of waayo-aragnimo caddaynaysaa in Beelaha leh 2-3 laamood soo saaro miraha si fiican. Haddii aan ka hadalno kala duwanaanshahan, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo baadiyaha of 1-2 dogob.
Si arrintan loo sameeyo, iyadoo la jiidayo, mid ayaa ka baxda baxsashada ugu xooggan, taas oo marka dambe u korto laan buuxa oo leh miraha.
Ma taqaanaa? In cagaarka ee yaanyada yaanyo ku jira walxaha sunta ah ee solanine, taas oo keeni karta xasaasiyad, cuncun iyo qandho, sidaas darteed, waxaa fiican in la sameeyo dhuxusha galoofyada.
Daryeel dheeraad ah oo loogu talagalay "Irina" waxay tilmaamaysaa tallaabooyinka fudud:
xannibaadda ciidda, dabacsanaanta, mulching leh ciid ama isku dar ah;
ka hortagga muuqaalka cayayaanka, isticmaalka sunta cayayaanka kiimikada ka hor marxaladda fruiting;
dharka ugu sarreeya ee yaanyada marxaladda abuurka miro by Bacriminta fosfate;
waqtigooda iyo si habboon u waraabinta waraabinta.
Markaad waraabiso waxaa haboon inaad ilaaliso. Waraabinta yaanyada waa inay ahaataa mid gaar u ah asalka geedka, si looga fogaado qoyaanka caleemaha. Biyaha waraabinta looma isticmaali karo hargab, waxaa fiican inaad u diiriso qorraxda.
Waqti ka dib markii la waraabiyo, ciidda ku wareegsan duurka waxay u baahan tahay in la yareeyo wax yar si looga fogaado joogitaanka biyaha.
Inta badan waxaa la sheegay in noocyo isku dhafan ee yaanyada ay yihiin kuwo aan la iska qaadin cudurada mana jecla cayayaanka. Hase yeeshee, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo aad u baahan tahay inaad ka warqabto.
Yaanyo "Irina" waxay u adkaysatay cudurrada badankood ee yaanyada, laakiin looma dhaafi karo cladosporia ama spot brown. Cudurrada fangas-ba'an ayaa saameeya caleemaha marka hore, ka dibna midhaha miraha. Intaa waxaa dheer, dhirta fangasku waxay ku sii jiri kartaa ciidda waxayna saamayn ku yeelan kartaa beeritaanka soo socda ee khudradda. Xakameyn wax ku ool ah waxaa ka mid ah ka hortagga cudurka, qallajinta ciidda ka hor beerashada, ku buufinta duurka ee wakiilada antifungal, ka saara dhirta saameeyeen.
Cayayaanka marar dhif ah ayaa leh noocyo kala duwan oo ay la socdaan dareenkooda, laakiin kuwa ugu caansan iyo kuwo badan ayaa weli saameynaya beerto tomato leh dadaal u caansan. Tani waa baradho baradho oo Colorado ah.
In dagaalka ka dhanka ah, sharciga ugu muhiimsan waa daaweynta geedo ka hor beerto in dhulka u furan. Ilaalinta noocan oo kale ah ayaa kaa caawin doonta inaad ilaaliso duurka illaa dhammaadka xilli-ciyaareedka.
Xaaladaha shucuurta ugu badan
Bannaanka u badan ayaa ka walaacsan kor u qaadayaasha kobcaya, oo ku magacawday kiimikada, waxayna door bidaan isticmaalka dawooyinka dadweynaha si loo kordhiyo wax soo saarka. Laakiin hadda, kiciyeyaasha dabiiciga ah oo aad u badan ayaa ka muuqda suuqa beeraha, oo aan ku sii noolaan doono waxoogaa badan.
Dhammaan dalagyada khudradda ah waxay ka kooban yihiin saamiyo phytohormones ah oo bixiya korriin, dhalid, iska caabin u ah deegaanka dibadda. Dabcan, geedka kasta ee hoormoonka ayaa xadidan xadidan, badanaana leh saamaynta arrimaha dibadda, midhaha ayaa hoos u dhacaya.
Si loo wanaajiyo koritaanka iyo midhaha yaanyada, yaryar badan oo kiciyeyaasha dabiiciga ah oo laga soo qaatay phytohormones dabiiciga ah ayaa horay loo sameeyay.
Mid kasta oo ka mid ah diyaargarowga ayaa leh waxyaabo gaar ah: qaar ka wanaajiya wax soo saarka, kuwa kale waxay dardar-saaraan, iyo kuwa kalena waxay ka caawiyaan dhirta inay u adkeystaan ​​cuduro kala duwan. Inta badan, marka koraayo yaanyada, kiciyeyaasha kobcinta kusalaysan asiidhka humic iyo soo saarista Echinacea ayaa loo isticmaalaa. Daawooyinkaan si adag u hoggaansamaan tilmaamaha waxay kordhiyaan difaaca dhirta iyo biqilka abuurka, waxay xoojiyaan geedo iyo ma waxyeeleeyaan tayada iyo badbaadada midhaha.
Tamaandhiga "Irina" waxay soo saartaa miraha leh dibad qurux badan, dhadhan iyo tayada ganacsi, taas oo ay ugu wacan tahay baaxadda isticmaalka yaanyada kala duwan ee noocaan oo kala duwan:
Sababtoo ah maqaarka cufan iyo xajmiga yar ee midhaha, yaanyadaasi waxay u fiican yihiin ilaalinta;
saxarka firfircoon wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho noocyada kala duwan ee diyaarinta casiir ama yaanyo;
Macmacaan macaan oo macaan leh ayaa suurtogal u ah inay isticmaalaan yaanyada "Irina" ee karinta - labadaba cusub oo la dubay ama la dubay.
Waxaan ogaanay waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee geedka "Irina" oo aan soo koobi karno - kala duwanaanta noocaas ah waxay soo jiidataa dhalidda iyo dulqaadkoodu sareeyo, laakiin waxay u baahan tahay daryeelka xanuunka: Haddii aad bixinaysid taxadar, waa inaadan helin cajiinka cajiibka ah.